​" ​ဆံပင်စတိုင်အသစ်လေးကိုပြောင်းလဲပြီးနောက်နဂိုရှိရင်းစွဲထက် ပိုမိုနုပျိုလှပလာတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုတင်လာခဲ့တဲ့ဝတ်မှုံရွှေရည်'' - Cele Gabar
CeleGabarပရိသတ်ကြီးရေ ဝတ်မှုံရွှေရည်ကတော့အကယ်ဒမီဆုနှစ်ဆုပိုင်ရှင်မင်းသမီးတစ်လက်ပါ။ သူမရဲ့ဇာတ်ကားတွေဟာ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိုပိုလက်ရာမြောက်ကာ ထိပ်တန်းစာရင်းဝင်မင်းသမီးတစ်လက်လို့တောင်ဆိုရမှာပါ။အမြဲရှင်းသန့်ကျော့ရှင်းကာ အရုပ်လေးတစ်ရုပ်လိုအမြဲလှပနေတဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်ကို ချစ်ပရိသတ်တွေကချစ်စနိုးနဲ့ရွှေကစ်လို့လည်းခေါ်ကြပါသေးတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့”New Hair …. Who’s this? 💇🏻‍♀️”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့အတူ ဆံပင်စတိုင်အသစ်ကိုပြောင်းလဲခဲ့​တဲ့ သူမရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကိုတင်လာခဲ့တာပါ။ အမြဲနုပျိုလှပကာ ဆယ်ကျော်သက်လေးတစ်ယောက်အလားထင်မှတ်ရတဲ့ရွှေကစ်ကတော့ အခုဆံပင်စတိုင်အသစ်နဲ့လည်း ထူးထူးခြားခြားလေးလှပနေတာပါပဲနော်။
အမြဲကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ကာ ခန္ဓာကိုယ်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနေထိုင်တတ်တဲ့ ပြည်သူချစ်မင်းသမီးလေးကတော့ ဆံပင်စတိုင်နဒ့လည်းလိုက်ဖက်ကြောင်း ပရိသတ်တွေကမှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြတာပါ။CeleGabarပရိသတ်တေွလည်း ရွှေကစ်ရဲ့ဆံပင်စတ်ုင်အသစ်လေးကသူမနဲ့လိုက်ဖက်ညီရဲ့လားဆိုတာမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါဦးနော်။
​” ​ဆံပင္စတိုင္အသစ္ေလးကိုေျပာင္းလဲၿပီးေနာက္နဂိုရွိရင္းစြဲထက္ ပိုမိုႏုပ်ိဳလွပလာတဲ့ပုံရိပ္ေလးေတြကိုတင္လာခဲ့တဲ့ဝတ္မႈံေ႐ႊရည္”
အကယ္ဒမီဆုႏွစ္ဆုပိုင္ရွင္မင္းသမီးတစ္လက္ပါ။ သူမရဲ႕ဇာတ္ကားေတြဟာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ပိုပိုလက္ရာေျမာက္ကာ ထိပ္တန္းစာရင္းဝင္မင္းသမီးတစ္လက္လို႔ေတာင္ဆိုရမွာပါ။အၿမဲရွင္းသန္႔ေက်ာ့ရွင္းကာ အ႐ုပ္ေလးတစ္႐ုပ္လိုအၿမဲလွပေနတဲ့ ဝတ္မႈံေ႐ႊရည္ကို ခ်စ္ပရိသတ္ေတြကခ်စ္စႏိုးနဲ႔ေ႐ႊကစ္လို႔လည္းေခၚၾကပါေသးတယ္။
ဒီေန႔မွာေတာ့”New Hair …. Who’s this? 💇🏻‍♀️”ဆိုတဲ့စာေလးနဲ႔အတူ ဆံပင္စတိုင္အသစ္ကိုေျပာင္းလဲခဲ့​တဲ့ သူမရဲ႕ ပုံရိပ္ေလးေတြကိုတင္လာခဲ့တာပါ။ အၿမဲႏုပ်ိဳလွပကာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေလးတစ္ေယာက္အလားထင္မွတ္ရတဲ့ေ႐ႊကစ္ကေတာ့ အခုဆံပင္စတိုင္အသစ္နဲ႔လည္း ထူးထူးျခားျခားေလးလွပေနတာပါပဲေနာ္။
အၿမဲကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ကာ ခႏၶာကိုယ္ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းေနထိုင္တတ္တဲ့ ျပည္သူခ်စ္မင္းသမီးေလးကေတာ့ ဆံပင္စတိုင္နဒ့လည္းလိုက္ဖက္ေၾကာင္း ပရိသတ္ေတြကမွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ၾကတာပါ။CeleGabarပရိသတ္ေတြလည္း ေ႐ႊကစ္ရဲ႕ဆံပင္စတ္ုင္အသစ္ေလးကသူမနဲ႔လိုက္ဖက္ညီရဲ႕လားဆိုတာမွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ပါဦးေနာ္။
Previous post အပြုံးတွေဝေဝေဆာဆာနဲ့ ကြည်နူးဖွယ်အပြည့်မင်္ဂလာပွဲ အခမ်းအနားဗီဒီယိုလေးကို မျှဝေခဲ့တဲ့ ထက်ယံ
Next post ” ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမခေတ်စားခင်ကတစ်နှစ်ကို ဝတ်စုံposterအခု၅၀-၁၀၀လောက်ရိုက်ကူးခဲ့ရကြောင်း သတိတရပြန်လည်ပြောပြလာတဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း”